Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) - Hello Sayarwon
Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်)
Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Quinapril + Hydrochlorothiazideကိုသွေးတိုးအတွက် အသုံးပြုကြ၏။ သွေးတိုးချပေးခြင်းဖြင့် လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးဖောက်ခြင်းနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါများကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
ဤဆေးကုန်တွင် ဆေးနှစ်မျိုးပါသည်။ quinapril နှင့် hydrochlorothiazide ဖြစ်သည်။ QuinaprilမှာACEI အုပ်စုဖြစ်ပြီးသွေးစီဆင်းမှုကောင်းစေရန် သွေးကြောများကိုပြေလျော့စေ၏။ Hydrochlorothiazid က ဆီးဆေးအုပ်စုတွင်ပါပြီးဆီးများများထွက်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်တွင်းမှ ဆားနှင့်ရေပိုများကိုထွက်သွားစေနိုင်သည်။
Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဤဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအစာရှိရှိမရှိရှိသောက်နိုင်ပါသည်။ များသေားအားဖြင့် တစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ်မနက်ခင်း၌သောက်ရ၏။ ညအိပ်ချိန်မှကပ်ပြီးသောက်မည်ဆိုပါကဆီးသွားဖို့ ခဏခဏထနေရပါလိမ့်မည်။ ဆေးကို အိပ်ယာမဝင်ခင် အနည်းဆုံး ၄ နာရီစောပြီးသောက်မှ ကောင်းမည်။
ဆေးပမာဏမှာသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ကုသမှုအားတုံ့ပြန်မှုတို့တွင် အခြေခံပါသည်။
အာနိသင်အကောင်းဆုံးရစေရန် ဆေးကိုမှန်မှန်သောက်ပါ။ မှတ်မိနေစေရန် နေ့စဉ် တူညီသောအချိန်၌သာသောက်ပါ။ ကောင်းလာပြီထင်ရသည့်တိုင် ဆေးကိုဆက်သောက်ရမည်။ သွေးတိုးတတ်သူအများစုတွင် နေမကောင်းသလိုမခံစားရတတ်ပါ။
ဤဆေးမှအာနိသင်အပြည့်အဝပြရန် ရက်သတ္တပေါင်းများစွာ ကြာတတ်ပါသည်။
ဤဆေးကုန်၌ မဂ္ဂနီစီယမ်ပါသောကြောင့် တစ်ချို့ဆေးများစုပ်ယူမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ကိုလက်စ်ထရောနည်းစေသောဆေးများကိုသောက်နေရပါကဤဆေးကိုအဆိုပါဆေးများမသောက်ခင် ၄ နာရီသို့မဟုတ် သောက်ပြီး ၄-၆ နာရီခြားပြီးမှသောက်ပါ။
အခြေအနေတိုးတက်မလာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုးဆိုးလာလျှင် (ဥပမာသွေးပေါင်တိုင်းတိုင်းတက်နေတုန်းသို့မဟုတ် ပိုတိုးလာတုန်းဆိုလျှင်) ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Quinapril + Hydrochlorothiazideကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Quinapril + Hydrochlorothiazideကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Quinapril + Hydrochlorothiazideဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Quinapril + Hydrochlorothiazideအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဤဆေးကိုမသုံးခင် ဤဆေးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်တခြား ACEI များ (captopril, lisinopril) နှင့် thiazides (chlorothiazide) နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်တခြားသောဓါတ်မတည့်မှုများရှိပါက ဆရာဝန်ကိုကြိုပြောပါ။ ဤဆေးတွင် သင့်နှင့်ဓါတ်မတည့်နိုင်သည့် inactive ဓါတ်ပစ္စည်းများပါနေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးကိုမသုံးခင် သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်များကို ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အားပြောပြပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများဖြစ်သောမျက်နှာ နှုတ်ခမ်း လျှာ လည်ချောင်းတို့၌ ဖူရောင်ခြင်း၊သွေးစစ်ထုတ်သည့် လုပ်ထုံးများ (LDL apheresis, dialysis)၊ ဂေါက်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ ခန္ဓါကိုယ်မှ ရေဓါတ်များဆုံးရှုံးခြင်း၊ သတ္တုမညီမျှမှုအားကုသမှုမလုပ်ခြင်း (သွေးတွင်းပိုတက်စီယမ် တက်ခြင်း ကျခြင်း)၊ လူးပတ်စ်ရောဂါ။
ခွဲစိတ်မှုမလုပ်ခင် သင်သုံးနေသည့်ပစ္စည်းများ(ဆရာဝန်ညွှန်သည့်ဆေး၊ အညွှန်းမလိုပဲသောက်နိုင်သည့်ဆေးနှင့် ဘယပင်ထွက်ဆေးများ) ကို ဆရာဝန်အားပြောပါ။
ချွေးအရမ်းထွက်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အန်ခြင်းတို့က ခန္ဓါကိုယ်မှအရည်ဓါတ်များကိုဆုံးရှုံးစေပြီးမူးမေ့လဲနိုင်ပါသည်။ ဝမ်းအကြာကြီးသွားနေခြင်း၊ အကြာကြီးအန်နေခြင်းတို့ဖြစ်နေပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းအားကာကွယ်နိုင်ရန် ဆရာဝန်ကတခြားမပြောလျှင် အရည်များများသောက်ပေးပါ။
ဆေးသည် နေရောင်ထိမခံနိုင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ နေရောင်နှင်ထိတွေချိန်များကိုကန့်သတ်ပါ။ နေပူဆာလှုံခြင်းနေမီးအိမ်လှုံခြင်းများကိုရှောင်ပါ။ အပြင်ထွက်မည်ဆိုပါကအကာကွယ်ပေးသည့် အဝတ်အစားများ နေရောင်ကာလိမ်းဆေးများသုံးပါ။ နေလောင်ခြင်း၊ အရေပြား၌ အရည်ကြည်ဖုများထခြင်း၊ နီခြင်းတို့ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ဤဆေးကုန်သည် သင်၏ပိုတက်စီယမ်လယ်ဗယ်ကို မြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ပိုတက်စီယမ်ဖြည်စွက်ဆေးများသို့မဟုတ် ပိုတက်စီယမ်ပါသောဆားအစားထိုးကုန်များအသုံးမပြုခင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဆီးချိုရှိလျှင် ဤဆေးကုန်သည် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်လယ်ဗယ်ပေါ်သို့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဆီးချိုမှန်မှန်စစ်ပြီး ဆရာဝန်ကိုပြသပါ။ သွေးတွင်းသကြားဓါတ် များလာသည့်လက္ခဏာများဖြစ်သောရေငတ်ခြင်း၊ ဆီးသွားများခြင်းရှိလာပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြပါ။ ဆရာဝန်က ဆီးချိုဆေးများချိန်ညှိခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အစားအသောက်တို့ကိုညွှန်ပါလိမ့်မည်။
အသက်ကြီးသူများသည် ဤဆေး၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သောခေါင်းမူးခြင်း၊ ပိုတက်စီယမ်လယ်ဗယ်များခြင်းတို့ ပိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဤဆေးကိုမသုံးရပါ။ မမွေးသေးသောကလေးသို့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးသည် နို့ရည်ထဲသို့ဖြတ်နိုင်၏။ နို့တိုက်ကျွေးမှုမစတင်ခင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ခန္ဓါကိုယ်မှဆေးကိုတုံ့ပြန်နေစဉ် ခေါင်းမူးခြင်း၊ မူးလဲခြင်း၊ မောပန်းခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပျောက်မသွားလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။
ခေါင်းမူးခြင်း၊ မူးလဲခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့ကျစေရန် ထိုင်ရာလှဲရာမှထသည့်အခါ ဖြည်းဖြည်းချင်းထပါ။
ဤဆေးကုန်သည် ခန္ဓါကိုယ်မှ ရေနှင့်ဓါတ်ဆားများအများအပြားဆုံးရှုံးရစေနိုင်သည်။ အလွန်အမင်းရေငတ်ခြင်း၊ အာအလွန်ခြောက်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးခြင်း မြန်ခြင်းမူမမှန်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ဆီးသွားနည်းခြင်းစသည့် ဓါတ်ဆားနှင့်သတ္တုဓါတ်နည်းသောလက္ခဏာများပေါ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းပြပါ။
ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သောကျောက်ကပ်လက္ခဏာများ (ဆီးပမာဏပြောင်းခြင်း)ပိုတက်စီယမ်များသည့်လက္ခဏာများ (ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းမမှန်ခြင်း)၊ မူးမေ့လဲခြင်း၊ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း၊ မျက်လုံးနာခြင်းများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။
ဤဆေးက (သေနိုင်သော) အသည်းရောဂါကိုရှားရှားပါးပါးဖြစ်စေတတ်သည်။ အသည်းပျက်သည့် လက္ခါများဖြစ်သောပျို့အန်ြ့ခင်းများရပ်မသွားခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အရေပြား အသားများဝါခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်းများ ဖြစ်လာပါကဆေးကုသမှုချက်ချင်းခံယူပါ။
ဤဆေးကြောင့် ပြင်းထန်သည့်ဓါတ်မတည့်ဖြစ်ခြင်းမှာရှား၏။ အောက်ပါပြင်းထန်ဓါတ်မတည့် လက္ခဏာများဖြစ်လာပါကအရေးပေါ်ကုသမှုများခံယူရပါမည် – အကွက်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ရောင်ခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊လျှာ၊ လည်ချောင်း)၊ ခေါင်းတအားမူးခြင်းနှင့် အသက်ရှူရခက်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
aliskiren, gold injections, lithium, sacubitril, ကိုယ်ခံအားကိုကျစေပြီး ပိုးဝင်လွယ်စေသောဆေးများ (everolimus, sirolimus), ပိုတက်စီယမ်လယ်ဗယ် တက်စေသောဆေးများ (ARBs including losartan/valsartan, birth control pills containing drospirenone)။
ဤဆေးကုန်၌ မဂ္ဂနီစီယမ်ပါသောကြောင့် တစ်ချို့ဆေးများစုပ်ယူမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် တစ်ချိန်တည်းသောက်လိုက်လျှင် ပိုဆိုးပါသည်။ ထိုဆေးများမှာquinolone ပဋိဇီဝဆေးများ (ciprofloxacin, levofloxacin), tetracycline ပဋိဇီဝဆေးများ (doxycycline, minocycline), သိုင်းရွိုက်ဆေးများ (levothyroxine), အရိုးပွခြင်းအတွက် ဆေးများ(bisphosphonates ဥပမာ- alendronate) စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာရင်းမှာအပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ ဆေးတစ်ခုနှင်တစ်ခု ခြားရမည့်အချိန် သောက်သင့်သည့်အချိန်များသိရန်အတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
တစ်ချို့ထုတ်ကုန်များတွင် သွေးတိုးစေသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သုံးနေသည့်ဆေးများ (အထူးသဖြင့် အအေးမိချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်စာ၊ NSAIDs ibuprofen/naproxen) စသည်များကိုစိတ်ချစွာသုံးနိုင်ရန် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုပြောပါ။
ပျား၊ နကျယ်တုပ်၍ ထိုးဆေးများသုံးလိုက်ရပြီးQuinapril ကိုသောက်နေပါသည်ဆိုပါက ပြင်းထန်သည့်ဓါတ်ပြုမှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ သင်သုံးနေသည့်ဆေးများအားလုံးကိုဆရာဝန်သိအောင် သေချာပြောပြရန်အရေးကြီး၏။
ဤဆေးကုန်သည် တစ်ချို့ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ (ပါရာသိုင်းရွိုက်လုပ်ငန်းကိုစစ်ခြင်း၀ ကို နှောက်ယှက်နိုင်ပြီးအဖြေမှားထွက်နိုင်ပါသည်။ သင့်ဤဆေးသုံးနေကြောင်း ဓါတ်ခွဲဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာဝန်များသိအောင် ပြောပြထားပါ။
Quinapril + Hydrochlorothiazideသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Quinapril + Hydrochlorothiazide က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Quinapril + Hydrochlorothiazideသည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Hydrochlorothiazide 12.5 to 25 mg-quinapril 10 to 20 mgကိုတစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်သောက်ရန်။
– hydrochlorothiazide-quinapril ၏ ကနဦးပမာဏကိုလူနာ၏ဆေးတစ်ခုစီအတွက် လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီးပေးရပါမည်။
CrCl less than 25 mL/min:သုံးရန်ညွှန်မထားပါ။
Quinaprilကိုhemodialysis သို့မဟုတ် peritoneal dialysis လုပ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်မထုတ်နိုင်ပါ။
-Hydrochlorothiazide-quinaprilကိုနေ့စဉ် တူညီသောအချိန်တွင် သောက်ရပါမည်။ အစာရှိမရှိကအရေးမကြီးပါ။
-ဆီးဆေးပေးရန်လိုအပ်သောကျောက်ကပ်ရောဂါလူနာများတွင် thiazide ဆီးဆေးအစား loop ဆီးဆေးများကိုပိုပေးကြ၏။
ကလေးတွေအတွက် Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကွီနာပရေးလ် + ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုသိုင်ရာဇိုက်ဒ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Quinapril + Hydrochlorothiazideကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Quinapril + Hydrochlorothiazideကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။